यूएईमा कोरोना जितेका नेपालीको अनुभव यस्तो! परदेशमा हुनेहरूले अवस्य हेर्नुहाेस् – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/यूएईमा कोरोना जितेका नेपालीको अनुभव यस्तो! परदेशमा हुनेहरूले अवस्य हेर्नुहाेस्
आबुधावी, यूएई ।
अप्रिल १४ मा कम्पनीमा कार्यरत सबैको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भयो । १५ जनाको स्वाब लिएकोमा मसहित १३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । त्यसको झण्डै एक सातापछि त्यही कम्पनीमा काम गर्ने एकजना भारतीय नागरिकलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो । हामी एकै डिमार्टमेन्टको फरक सेक्सनमा काम गथ्र्यौं ।
नियमअनुसार यहाँका हरेकलाई क्वारेण्टीनमा राख्नुपर्ने हो । तर त्यसो भएन । कम्पनी नियमितरुपमा आफ्नै सुरमा चलिरह्यो । तर अप्रिल १४ मा कम्पनीमा कार्यरत सबैको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भयो । १५ जनाको स्वाब लिएकोमा मसहित १३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।
नेपालमा थप २ जना संक्र’मितको मृ’त्यु, मृत’क संख्या ७५ पुग्यो